RSS kune Email Solution yeWordPress
Muvhuro, Ndira 10, 2011 NeChishanu, Kurume 1, 2013 Douglas Karr
Wangu Campaign Pro uye wandaishanda naye, Bill Dawson, vakagadzira yedu nyowani vhiki yevhiki nevhiki izvo zvakangomiswa nhasi. (Kana usati wanyorera, urikushaiwa mari inodarika $ 12,000 mumubairo… uye uchikura!).
Kuti zviite nyore, Luke Newton weMy Campaign Pro, gadzira template mukati meiyo system iyo inongobata HTML kubva chero kupi pawebhu - kungave kune chikafu kana rine simba reHTML peji. Iyi inonzi snippet mune yake system uye inogona kunongedzera kune zvakachengetedzwa zvemukati, zvine simba zvemukati, kana kudhonza kubva kuRSS kana kubva pawebhu peji.
Nhanho inotevera yaingove yekureva iyo snippet mukati meHTML yeemail template uchishandisa tambo yekutsiva:
Ipapo Bill akaronga chikamu mukati meWordPress chinonzi Newsletter izvo zvinongoratidzwa pane yakavanzika peji remukati uye kusarudzika kubva kune chero zvinyorwa pane iyo blog. MuWordPress, izvi zvinoitwa nekuwedzera zvimwe zvinhu zvemubvunzo pamusoro pechiuno.
query_post ($ query_string. '& kati = -4835');
Isu takagadzirisazve chikafu kuti tibvise chero zvinyorwa, izvo zvinozadzikiswa mumubvunzo:
Nei izvi zvakanaka? Vhiki yega yega, ini ndiri kungonyora blog blog kune iyo Tsamba tsamba uyezve kuita mushandirapamwe wekutumira. Iyo sisitimu inongotsvaga zvirimo kubva kune yakasarudzika peji (pamwe neyangu Twitter feed) uye iyo email inogadzirwa uye inotumirwa. Kwete ichi chikuru chete kuti ini ndinongofanira kunetseka nezvekunyora zvemukati mukati meWordPress… ndichave zvakare nekopi yeemaemail angu ese anga atumirwa!
Ruka ari kupa 2 marezinesi egore (aine anosvika mazana mashanu email yakatumirwa) pamwe nerutsigiro - saka ive shuwa kusaina iyo Kushambadzira Tekinoroji Tsamba kuti uwane mukana wekuhwina!
Tags: blog tsambablog kuemailEmail Marketing
Jan 10, 2011 na10:41 PM
Ndatenda nepositi Doug! Isu tinofara zvikuru nezvetsamba nyowani uye tinodada kuva chikamu chayo!
Takaona kuti iyi inzira huru yevashandisi veWordPress vanorema kuti varambe vachishandisa injini yavo yekunyora yavanofarira kugadzira zvirimo nekuzvichengeta munzvimbo imwechete.
Simba rechokwadi riri mukukwanisa kuunza iyo yakafanana nhanho yeautomation inowanikwa muWordPress kune email. Ingo dhonza zviri mukati uye wowedzera kune inogarorongwa kutumira kune yakanyanya otomatiki email nhevedzano ine zvishoma inoenderera kugadzirisa. Hapasisina kukopa uye kunama - ingoivaka kamwe uye otomatiki!
Uye nezvose zvirimo muWordPress - zviri nyore kugovera izvo zvirimo kunze kweemail.
Kana iwe uri mushandisi weWordPress - zvine musoro kuzviita nenzira iyi!
Zvakare - tinoda kushuvira rombo rakanaka kune wese anopinda mumakwikwi - isu tinofara zvikuru kuve chikamu che2,500th post mhemberero!